युगसम्बाद साप्ताहिक - सरकार मधेश आन्दोलनप्रति एकदम सम्वेदनशील छ : उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार
Saturday, 02.16.2019, 10:42pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 11.10.2015, 11:17am (GMT+5.5)
० तपाई सरकारको उपप्रधानमन्त्री मधेशको अहिलेको समस्याको बारेमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म मात्रै होइन, पुरै सरकार मधेश आन्दोलनको बारेमा निकै गम्भीर देखिएको छ । पछिल्लो समय ओलीजीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले वार्ताको पहल गरेर वार्तालाई सकारात्मक मोडमा पुर्याएको छ । यही सरकारको पालामा प्रथम पटक वार्तामा आन्दोलनलाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गरेको छ । राजनीतिक रुपमा समस्या समधान गर्न विषयले प्रवेश पाएको छ । दुई पक्षबीच जुन रुपमा वार्ता भएको थियो त्यो निकै सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको थियो तर बीचमा वीरगञ्ज घटना भएको कारणले अलि अविश्वासको वातावरण सृजना भएको छ ।
० हालसम्मको वार्तामा के के उपलब्धि भयो त ?
पहिलो कुरा वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढ्नु नै उपलब्धि हो । अर्काे कुरा, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र सविधानमा राख्नका लागि संशोधनको तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै आन्दोलनकारीले राखेको पाँच बुँदे शर्तमा अधिकाँश पूरा भइसकेको छ । केही बाँकी छ त्यसको बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
० के के पूरा भयो त ?
मृतक परिवारलाई दिने भनिएको १०–१० लाख रुपैयाँ दिने काम शुरु भएको छ । केहीलाई दिइएको पनि छ र केही बाँकी छन् । त्यसलाई पनि दिने प्रकृया शुरु भएको छ । आन्दोलनमा घाइते भएकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने कुरा पनि निर्णय भइसकेको छ । थारु आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको झूठा मुद्दाहरू पनि फिर्ता लिने प्रकृया शुरु भएको छ । अरु बाँकी विषयमा पनि सरकारले छलफल गरिरहेका छ ।
० मधेशको आन्दोलनलाई समाधान गर्न सरकारले के सोचेको छ ?
तराई मधेशमा जारी आन्दोलनलाई राजनीतिक र कुटनीतिक ढंगबाट समाधान गर्नुपर्छ । र, सरकारले त्यसतर्फ गम्भीर ढंगबाट सोचिरहेको छ । मधेशको आन्दोलन राजनीतिक समस्या हो तर अहिले देखिएको सीमा अवरोध राजनीतिक समस्याको साथ साथै कुटनीतिक समस्या पनि रहेकाले त्यसलाई त्यसै ढंगबाट समाधान गर्नुपर्छ । मधेशको अहिले मुख्य राजनीतिक समस्या भनेको सीमांकन हो र यसलाई राजनीतिक सहमतिबाट टुग्याउनु पर्छ ।
० सीमा अवरोध कुटनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभयो के नाकाबन्दी भारतले लगाएको हो त ?
मैले पहिलादेखि भन्दै आएको के हो भने सीमा अवरोध दुईतिरबाट भएको हो । मैले भारतले गरेको हो भनि भन्दिन तर नाका आन्दोलनकारीबाट र सीमापारीबाट पनि अवरोध भएको हो । र यसलाई कुटनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्छ ।
० तपाईले त आन्दोलनलाई बीचैमा छाडेर सरकारमा गएको आरोप छ नि ?
मैले कुनै पनि आन्दोलन छाडेका छैन न मुद्दा छाडेको छु । न मधेशको मुद्दा छाडेको छु न थारुको मुद्दा छाडेको छु । हामीले उठाउँदै आएको माग अहिले पनि यथावत छ । त्यसका लागि हामी संघर्ष गरिरहेका छौ । सरकारमा जानु अघि दुई दलसँग गरेको आठ बुँदे सम्झौता पढ्नु भएको होला । त्यसमा प्रष्ट छ । हामी कुनै पनि मुद्दा छाडेका छैनौ । हामी संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पार्टी भएका हुनाले संसदीय पद्दती अनुसार सरकारमा सहभागि भएका हौं । हामी सरकारमा गएर मुद्दा छाडेको र मधेशी थारुको अधिकारको कुरा नगरेको होइन ।
० सरकारमा बसेर पनि आन्दोलन हुन्छ र भन्या ?
हामी सरकार, सदन र सडक तीनटै मोर्चामा संघर्ष गरिरहेका छौ । मधेश र थारुको माग पूरा गराउन सरकारमा पनि संघर्ष गरिरहेका छौ । सदनमा पनि गरिरहेका छौ र सडकमा पनि गरिरहेका छौ । अहिलेको मधेश आन्दोलनमा हाम्रो थुप्रै साथीहरू घाइते हुनु भएको छ र रौतहटमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता राजकिशोर ठाकुरको मृत्यु पनि भएको छ । हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवका छोरा विक्रम प्रहरीको गोली लागेर घाइते हुनुभएको छ । त्यसैले हामी सरकारमा गएपनि मुद्दा छाडेका छैनौ । जति आन्दोलन गरेपनि सहमतिको विकल्प छैन । वार्ताको विकल्प छैन र त्यसमा हाम्रो पहल रहेको छ ।
० मधेशमा पार्टीले आन्दोलन गरिरहेका छन् भन्नुहुन्छ तर ती सबै जिल्लाका जिल्ला कमिटी सदस्य अध्यक्षहरूले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ भने आन्दोलन कसले गरिरहेका छन् ?
हेर्नुस्, एउटा जिवित पार्टीमा कार्यकर्ता, नेता आउने जाने भइरहन्छन् । कोही छाडेर गएका छन् भने कोही आएका पनि छन्, त्यसलाई तपाईहरूले हेर्नु हुन्न । त्यसैले यसमा धेरै टिकाटिप्पणीको आवश्यकता छैन । अहिले पनि तराई मधेशमा हाम्रो थुप्रै कार्यकर्ता तथा नेताहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
० मधेशवादी दलसँगको वार्ता भंग भएको हो त ?
होइन, वार्ता भंग भएको छैन । सरकारी वार्ता समितिका संयोजक कमल थापाजी जेनेभा जानुभएको थियो त्यस कारणले यस्तो देखिएको थियो । उहाँ आउने वित्तिकै पुनः वार्ताको काम शुरु हुन्छ । वीरगञ्ज घटनाले केही अविश्वासको वातावरण सृजना भएको हो तर, वार्ता शुरु भएपछि त्यो पनि हट्ने छ ।